Telefishanka Qaranka Somaliland Oo Helay Masuul Hanan Kara Wax Soo Saarka Iyo Horumarkiisa | FooreNews
Home wararka Telefishanka Qaranka Somaliland Oo Helay Masuul Hanan Kara Wax Soo Saarka Iyo Horumarkiisa
Telefishanka Qaranka Somaliland Oo Helay Masuul Hanan Kara Wax Soo Saarka Iyo Horumarkiisa
Hargeysa (Foore)- Tan iyo markii dhawaan xilka agaasime ee telefishanka qaranka loo magacaabay Md. Khadar Cali Gaas waxa is badal weyni ka muuqdaa hannaanka shaqo iyo wax soo saar ee telefishanka qaranka Somaliland oo muddo badan si weyn bulshadu u saluugsanayd.
Saddexdii bisha September ayay ahayd markii madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo digreeto madaxweyne ku soo saaray magacaabista masuul Khadar Cali Gaas isla markaana uu telefishanka qaranka kaga dhigay hay’ad madax bannaan oo hawlaheeda qaran si madax bannaan uga shaqaysa.
Telefishanka qaranka Somaliland oo baahintiisu si weyn u korodhay ayaa imika badiba dacalada dunida laga daawadaa, taasi oo keentay in shucuubta reer Somaliland ee daafaha dunida ku kala nooli ka helaan wararka dalka iyo dadka. Si hadaba telefishanku ula jaan qaado korodhkaasi ku yimid awoodiisa baahineed waxa lagama maarmaan noqotay in la helo maamul khibrad ahaan iyo aqoon ahaanba hanan kara hawshaasi.
Md.Khadar Cali Gaas oo ahaa agaasimaha telefishanka qaranka qaybtiisa London, mudadii yarayd ee uu caasimada dalka Ingiriiska ka hawl galayay waxa uu telefishanku noqday mid si weyn u soo jiitay daawadayaal badan oo ku nool Yurub. Khadar Cali Gaas waxa uu dhidibada u taagay in telefishanka qaranku ka hir galo London isaga oo xukuumadda kala shaqeeyey taabbo galinta arrintaasi.
Imika oo loo magacaabay masuulkan agaasimaha guud ee telefishanka qaranka waxa marag madoon noqonaysa in uu hawshan hanan karo sida ugu habboona wax uga qaban doono horumarinta guud ahaan telefishanka iyo wax soo saarkiisa. Khadar Cali Gaas oo ah saxafi aqoon durugsan u leh saxaafadda iyo guud ahaan warbaahinta waxa la gudboon in aanu dheg jalaq u siin qaylada ka soo yeedhaysa kuwa telefishanku ka socon waayay ee aan lahayn aragti ay wax kaga badalaan telefishanka kuna horumariyaan. Agaasimaha cusub ee telefishanka qaranka waxa la gudboon in aanu u habran koox kasta oo isku dayda in ay aragtidiisa wax qabad hor istaagaan waana in uu wax walba ka hor mariyaa danta qaranka iyo in telefishanka qaranku noqdo mid muraayad u noqon kara horumarka dalka oo caalamka u gudbiya waji cusub oo ilbaxnimo iyo aqooni ka muuqato.
Previous PostXisbiga UCID Oo Guddoomiye U Magacaabay Gobolka Maroodi-Jeex Next PostAbwaan Hadraawi Oo Ku Guulaystay Aqoonsi Caalami Ah